Jesu Anoita Zvishamiso Nesimba Raani? | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
Jesu Anoita Zvishamiso Nesimba Raani?
MATEU 12:22-32 MAKO 3:19-30 RUKA 8:1-3
JESU ANOTANGA RWENDO RWAKE RWECHIPIRI RWEKUPARIDZA
ANODZINGA MADHIMONI UYE ANOTAURA KUTI KUNE CHIVI CHISINGAZOKANGANWIRWI
Achangopedza kutaura nezvekuregererwa kwezvivi pamba pemuFarisi anonzi Simoni, Jesu anotangazve kutenderera achiparidza muGarireya. Rava gore rake rechipiri achiparidza, uye ari kufamba nevadzidzi vake 12 nevamwe vakadzi vaakaporesa “pamidzimu yakaipa uye pazvirwere.” (Ruka 8:2) Vamwe vacho ndiMariya Magadharini, Suzana, naJoana uyo ane murume anoshanda mumuzinda waMambo Herodhi Andipasi.
Vanhu vakawanda pavari kunzwa nezvaJesu, nharo dziri kuitwa pamusoro pake dziri kuwedzerawo. Izvi zvinoonekwa paanoporesa mumwe murume anounzwa kwaari akagarwa nedhimoni ari bofu uye asingagoni kutaura. Iye zvino ava kukwanisa kuona nekutaura uye haasisina kugarwa nedhimoni. Vanhu vari kushamiswa nazvo zvekuti vari kungotaurirana vachiti: “Kuti uyu haangavi iye Mwanakomana waDhavhidhi here?”—Mateu 12:23.
Vanhu vauya pamba pari kugara Jesu vakawandisa zvekuti iye nevadzidzi vake havana kana mukana wekudya. Asi havasi vese vanofunga kuti Jesu ndiye “mwanakomana waDhavhidhi” akavimbiswa kuti aizouya. Vamwe vanyori nevaFarisi vatobva kuJerusarema chaiko asi kwete kuzonzwa nezvake kana kuti kuzomutsigira pabasa rake. Vari kuudza vanhu kuti “Iye anaBherizebhubhu, uye anodzinga madhimoni achishandisa mutongi wemadhimoni.” (Mako 3:22) Hama dzaJesu padzinonzwa nezvezviri kuitika izvi, dzinouya kuzomubata. Nechinangwa chei?
Vanun’una vaJesu havasati vava kubvuma kuti iye Mwanakomana waMwari. (Johani 7:5) Jesu wavari kunzwa kuti ari kukonzera zhowe zhowe asiyana naJesu wavaiziva pavaikura vose kuNazareta. Vanobva vafunga kuti pfungwa dzake hadzichatore zvakanaka, voti: “Ava kupenga.”—Mako 3:21.
Asi zvaari kuita zvinoratidza kuti anopenga here? Jesu achangobva kuporesa munhu anga akagarwa nedhimoni, uyo ava kukwanisa kuona nekutaura. Hapana munhu angambozviramba. Saka vanyori nevaFarisi vanoedza kumupa mhosva kuti vanhu vasaona zvakanaka zvaanoita. Vanoti: “Munhu uyu hapana chimwe chaanoshandisa kudzinga madhimoni kunze kwaBherizebhubhu, mutongi wemadhimoni.”—Mateu 12:24.
Jesu anoziva zviri kufungwa nevanyori nevaFarisi, saka anoti: “Umambo hwose hwakapesana hunoparara, uye guta rose kana imba yakapesana haizomiri. Saizvozvowo, kana Satani achidzinga Satani, iye apesana pachake; saka, umambo hwake huchamira sei?”—Mateu 12:25, 26.
Apa ataura zvavasingakwanisi kuramba! VaFarisi vanoziva kuti pane vamwe vaJudha vanoita zvekudzinga madhimoni. (Mabasa 19:13) Saka Jesu anobvunza kuti: “Kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu, vanakomana venyu vanoadzinga vachishandisa ani?” Saka ari kureva kuti naivowo vari kudzinga madhimoni naBherizebhubhu. Jesu anozowedzera kubudisa pfungwa yacho achiti: “Asi kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa mudzimu waMwari, chokwadi umambo hwaMwari hwasvika kwamuri.”—Mateu 12:27, 28.
Jesu anopa muenzaniso achiratidza kuti kudzinga kwaari kuita madhimoni kunoratidza kuti ane simba pana Satani achiti: “Munhu anogona sei kupinda nechisimba muimba yomunhu akasimba otora nechisimba zvinhu zvake zvinotakurika, kana akasatanga asunga munhu wacho akasimba? Uye achabva apamba imba yake. Iye asiri kurutivi rwangu anorwisana neni, uye asingaunganidzi neni anoparadzira.” (Mateu 12:29, 30) Zvechokwadi vanyori nevaFarisi vari kurwisana naJesu, vachipa uchapupu hwekuti vari kushandiswa naSatani. Vari kuparadzira vanhu vachiita kuti vasauye kuMwanakomana waMwari, uyo ari kushanda achitungamirirwa naJehovha.
Jesu anonyevera vanhu ivavo vari kumupikisa vachishandiswa naSatani achiti: “Zvinhu zvose zvichakanganwirwa vanakomana vevanhu, pasinei nokuti zvivi zvavakapara zvakaita sei uye kuti kumhura kwavakaita kwakaita sei. Zvisinei, munhu wose anomhura mudzimu mutsvene haakanganwirwi nokusingaperi, asi ane mhosva yechivi chisingaperi.” (Mako 3:28, 29) Saka vanhu vari kuti zvinhu zviri kuonekwa pachena kuti zviri kuitwa nemudzimu waMwari, ivo voti zviri kuitwa naSatani, vari kuzviparira zvechokwadi!
Ndivanaani vari kufamba naJesu parwendo rwake rwechipiri muGarireya?
Chii chinoita kuti hama dzaJesu dziedze kumubata?
Vanyori nevaFarisi vanoedza sei kushora zvishamiso zviri kuitwa naJesu, uye Jesu anovapindura sei?
Zvishamiso zvaJesu hazvina kungobatsira vaIsraeri chete, asiwo zvairatidza zvaachaitira vanhu munguva pfupi iri kuuya.